လွန်ခဲ့သောတစ်လကကျွန်ုပ်က“ဆီးချိုရောဂါအဘို့အမဟာမိတ်«။ တူညီတဲ့ဆောင်ပုဒ်အောက်မှာအခန်းကြီးတစ်ခန်းရှိတယ် "၂၁ ရက်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်".
အခန်း ၁၆ မှာ Mindfulness အကြောင်းပြောကြတယ် ငါတို့ပြီးသားကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအများကြီး။ သို့သော် ဒီဗီဒီယိုကဟာသမှတ်စုတစ်ခုပေးပြီးဒီသတိရမှုမှာဘာတွေပါဝင်သလဲဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းရှင်းပြထားတယ်။
Ricardo Moure သည် Mindfulness မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်JoséMaríaLópezနှင့်ဤနည်းစနစ်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ရှင်းပြသည်။
သင်စိတ် ၀ င်စားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးများအားအပြစ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းအုပ်၏ရုံးခန်းသို့ပို့ခြင်းများပြုလုပ်မည့်အစား Baltimore ကျောင်းတွင်သူတို့ခေါ်ဆိုထားသောအရာရှိသည် "သတိရယခုအချိန်တွင်အခန်းက".
ဒီအခန်းကအပြစ်ပေးတဲ့နေရာလိုမဟုတ်ဘူး။ ယင်းအစား၎င်းသည်အလင်းများနှင့်ခရမ်းရောင် Plush ခေါင်းအုံးများဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ အသည်းအသန်ဖြစ်နေသည့်ကလေးများကိုအခန်းထဲထိုင်။ သူတို့၏အသက်ရှူခြင်းဖြင့်တရားအားထုတ်ရန်တိုက်တွန်းသည်။ သူတို့ကအဘယ်အရာကိုဖြစ်ပျက်အကြောင်းကိုပြောဆိုရန်တောင်းနေကြသည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြသည် သတိရှိသူတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာနှင့်အတူလူပဒေသရာဇ်နိုင်ပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသံချပ်ကာ စိတ်ပျက်စရာစိတ်ခံစားမှုဆန့်ကျင်နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » သတိ » စိတ်အေးအေးဆေးဆေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲဆိုတာသူတို့ကမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူတို့ပြောပြတယ်
ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်သူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အကြံဥာဏ် ၉ ချက်
သင်၏ hippocampus အရွယ်အစားကိုတိုးစေလိုသဖြင့်သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေလိုသလား။ လုပ်ပါ